heater amanzi, ugesi USB "Ariston" phakathi abathengi ujabulele funa Amazing. Ngokusho amandla kudivayisi zihlukile, kodwa ezifanayo design onobuhle. Izakhi Ukushisa ngokuvamile yakhelwe imithwalo eliphezulu. Lokukhipha ukuxhumana ukufakwa osayizi ejwayelekile, futhi izinkinga zedivayisi lwenethiwekhi zenzeka kuyaqabukela. Uma sikhuluma nemibi, kubalulekile ukuphawula ukuthi eziningi izimpahla Akuwona umsebenzi lokulawula ingcindezi.
Modulators ngezikhathi ezithile luntengantenge. Ukuvikelwa zinhlelo amakilasi ezahlukene. Amamodeli 2 kW athatha amandla akuyona ukonga. Kufanele ibe amanzi heater okuhle esitolo angaba yizinkulungwane 16. Hlikihla.
Kanjani heater amanzi?
Standard amanzi heater accumulative uhlobo kufaka isilawuli, a modulator icwecwe futhi edluliselwe. Amayunithi ukulawula eminingi evame ukusetshenziswa izinhlobo esakhelwe futhi zihlukene kakhulu conductivity. Ukulungiswa kuya izinhlelo zokuphepha akhiqizwa ku blocker. I nezinzwa ukufakwa phansi amathangi. valve asetshenziswa ukuvimbela ukuvuza amanzi. Avame ezazenziwe ngethusi noma steel.
A alondoloze nemithombo yamanzi ipayipi iqinile ngokusebenzisa olwandisa. Kufanele ukhumbule ukuthi kukhona model ngezimpawu ukuthi ekwazi ukumelana nokucindezelwa 30 Pa. Thermometer babe amanzi ashisayo ngokuvamile ukukhwezwa eduze inzwa.
Kuyini ezithakazelisayo imodeli ABS Andris Lux 30?
Yiziphi izinzuzo esemqoka yalolu imodeli? Empeleni, amanzi heater USB "Ariston" (30 amalitha) uyakwazi ukuziqhayisa i tank kakhulu. ekilasini ezishisayo Ukuvikelwa osebenza P40. Uma ukholelwa ukuthi ukubuyekezwa, izinga lokushisa 45 degrees baqashwa ngokushesha ngokwanele. Ayini nemibi imodeli babe? Eyokuqala eshaya Ukushisa isici esincane. I izinzwa elisetshenziswa uhlobo idivayisi siteshi. I modulator lusebenza kahle futhi akuvamile ushise. System "Eco" isitoreji amanzi heater "Ariston" (30 amalitha) kuyinto. Intengo imodeli ezitolo ruble 5939.
Amapharamitha heater Ariston ABS Blu R 40 V Slim Optima
Lezi heater amanzi isitoreji Electric "Ariston" (40 amalitha) esingcono, futhi kufanele wazi. imodeli Amandla ilingana 3.3 kW. Izinkinga okweqile ethangini kule divayisi akuzona esabekayo. tank amanzi ligcwele kunalokho ngokushesha. Yiziphi bokwenza kuthiwa? Phakathi amaphutha ezinkulu okufanele ibhekwe njengelungelo ivolumu ethangini nesizotha.
Futhi, thermometer elincane yesiteleka. Cabanga-ke ngempela nzima value. KuMlawuli ukuguqulwa senziwa ngokuphelele plastic. ipayipi Inlet usinika amanzi abandayo kusetshenziswa khona 2.3 cm. Ngokuvikela nasezinsikeni izindlu futhi baphule yinkinga.
Model izici ABS PRO ECO 80 H
Iziphi izici bungabonakala kule yunithi? Lezi heater amanzi, isitoreji kagesi "Ariston" kuphawuleka ngomklamo ezinhle kanye nesisekelo esiqinile. Thermometer isebenzisa standard, futhi itholakala engxenyeni engezansi yomzimba. I "Eco Plus" enikeziwe ngumkhiqizi. Ingcindezi oyinhloko inakekelwa phezu Imibhobho esemzimbeni 4 Pa.
uhlelo isivikelo okweqile we edluliselwe isetshenziswa ebangeni lesithathu. Ochwepheshe abaningi adunyiswe umkhiqizo khona isivikelo kagesi. I modulator kule heater amanzi esetshenziswa ulwelwesi. Uphawu senziwa ngokuphelele polyurethane. auto-zokuxilonga imodeli inketho kusekelwa. Idivayisi usebenza kusukela inethiwekhi 220 V, intambo zingafakwa ngokuqonda ngemuva umzimba. Ingabe amanzi ashisayo isitoreji idatha, kagesi "Ariston" mayelana ruble 6419.
Kuyini ezithakazelisayo imodeli ABS Andris lux ECO 10U?
Lokhu kagesi amanzi isitoreji heater (10 amalitha), "Aristo" has nemingcele ezilandelayo: amandla 3.3 kW, a ingcindezi ubuncane 2 Pa. Ukuvikelwa ezishisayo yena osebenza ekilasini P50. Ochwepheshe zale divayisi, ngokuvamile basabela kahle. Nokho, kubalulekile ukuphawula ukuthi ethangini wasebenzisa ukujiya encane. Ingcindezi oyinhloko ilingana 4.5 Pa Imibhobho esemzimbeni. Ukuvikelwa frost kulokhu engekho. Ochwepheshe Baveza inzwa ezimbi. Ukuze lokushisa 40 degrees amanzi sekuqala ukufudumala pretty masinyane.
ukunakwa umkhiqizo ufanelwe ikhava eliqinile le ezansi. Fuse, imodeli has eyodwa kuphela. Self-test ugijima ngokuzenzakalelayo. Ukuze lokushisa 45 degrees amanzi sekuqala ukufudumala imizuzu 35. Ukusetshenziswa kwamandla kagesi ngenkathi ngezithuba 400 Watts. I asebenzayo Ukuvikelwa kagesi kusukela ukuguqulwa okungaxhunyiwe ku-intanethi. Ukuze ezindlini ezinkulu kudivayisi ofanele kuyinto ephawulekayo. Zokushisela isetshenziswa ekukhiqizeni "Micro Plasma". "Nanomiks" uhlelo singanikezwanga e heater. Thenga imodeli kungaba ruble 6429 nje.
Emqulwini Amapharamitha ABS PRO PLUS PW 50 V Slim
Iziphi izici kungenziwa kuphawulwe kulesi heater amanzi? Ochwepheshe bathi endaweni yokuqala compact kudivayisi. Ugesi ukusetshenziswa kuba ongabalulekile, izikweletu ezinkulu ngeke. Londoloza ne heater amanzi ulula. Futhi uzinake ukuthi idivayisi enziwe uhlelo ezinhle isivikelo okweqile P44 chungechunge. Kulokhu, izinga lokushisa ivelele ngokuba lalilincane. Ukuguqulwa isebenza voltage 220 V lokushisa 45 degrees amanzi ukufuthelana ngokushesha okukhulu. I element Ukushisa ivikelwe ukugqwala, futhi umonakalo yayo ngeke siphile. I edluliselwe kuleli cala ezenziwe ngensimbi engagqwali. I Coefficient ukushisa komzimba azungeze 70%. okusheshayo Ukushisa umsebenzi, imodeli akukho. Intengo kubhayela kuhluka ruble 6500.
Model izici ABS PRO ECO INOX PW 100 V
Kuyini ezithakazelisayo isitoreji amanzi heater (100 amalitha) ka "Ariston"? Eyokuqala ivolumu ithangi futhi isisekelo esiqinile yesiteleka. ingcindezi umkhawulo isibonisi eliphezulu kakhulu futhi ezingeni-10 Pa. Ukuvikelwa ezishisayo osebenza K45 isigaba. Abanye ochwepheshe bakholelwa ukuthi idivayisi kufanelekile ezindlini ezinkulu. Nokho, kubalulekile ukuqaphela ukuthi conductivity ka akusiyo eliphezulu kakhulu. Inkomba ukushisa komzimba ngezithuba 55%.
Ngezinye umthwalo omningi idivayisi ibusa kancane. okusheshayo Ukushisa umsebenzi isebenza kahle. Ubuchwepheshe "Eco Plus" uhlelo luhlala lunjalo. Inikwe amandla yi-Water Heater 220 V futhi zingamelana ukuminyana eside. KuMlawuli ukuguqulwa senziwa ngokuphelele plastic. Uma sikhuluma nebubi, abathengi bathi okunamathiselwe ababuthakathaka futhi thermometer encane. Ngesikhathi esifanayo luziveza Ukushisa element has kakhulu kuyaqabukela. Ingabe lezi heater amanzi isitoreji Electric "Ariston" 100 amalitha (intengo emakethe) ruble mayelana 11.900.
Kuyini ezithakazelisayo imodeli ABS PRO R 50 V?
Wathi amanzi isitoreji heater (amalitha angu-50) of "Ariston", ngaphandle kokungabaza, kufanelekile Cottages. Nge ingcindezi uyaphila, kanti ukuxhumana asesabi overload. Nokho, kukhona ububi ukuguqulwa. Abathengi uqale ukhwaliti ongaphakeme we modulator. Lapho kushintshwa lokushisa zedivayisi ngeke isebenze kahle.
Ubuningi amandla Inkomba sise azungeze 2 kW. uhlelo isivikelo okweqile, isitoreji amanzi heater (50 amalitha) ka "Ariston" has ekilasini P55. Abanye ochwepheshe ukhombe umklamo omuhle zedivayisi kanye phansi okuqinile. I fuse akesabi ukugqwala. Ubuchwepheshe "Eco" Ngokusho ukusekelwa isilinda. intengo yayo iqala ruble 6579.
Amapharamitha ABS SL 20 amanzi heater
Ingabe lokhu ukulingana heater amanzi isitoreji kagesi (20 amalitha) ka "Ariston" efulethini elincane? Zonke izazi zithi amasudi.
Imodeli ifakwe iziqobosho okuhlala. nokusimama Inkomba e ukuguqulwa impela high. Nokho, kukhona izinkinga kanye amapayipi okweqile. Kulokhu akukho ekilasini uhlelo Ukuvikelwa modulator kuqala. Uma ukholelwa ukuthi umbono wezazi, izinga lokushisa 40 degrees ithuluzi dials ngokushesha.
Izinga nokushisa ingeqi 55%. Emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni esetshenziswa ekilasini P30. Ubuchwepheshe "Eco Plus" yile divayisi, ngeshwa, ayisekelwe. Ayini nemibi amanzi heater babe? Okokuqala kubalulekile ukusho ukuthi imodeli ibusa ugesi omningi. Umnotho imodi ayisebenzi. Ukuze yashesha amanzi Ukushisa ukuguqulwa esifanelana kahle.
Model izici ABS PRO ECO INOX 30 V Slim
Iziphi izinzuzo ezivame amanzi isitoreji idatha heater, kagesi "Ariston"? Ochwepheshe kanye abathengi uvumile ukuthi ukuguqulwa mkhulu endlini enkulu. Futhi, idivayisi angathengwa ngaleso dacha. Izinkinga okweqile fuse akazange esabe. Yiziphi bokwenza kuthiwa? Phakathi bokwenza Kubalulekile ukusho le conductivity abampofu. amandla amancane supply ayikuvumeli ngokushesha kulungele ethangini lamanzi. Tubular heater kabi kakhulu wavikela futhi ngaphambi kokuyithenga kufanele kucutshungulwe. Model angathengwa esitolo ngoba ruble 6259.
Kuyini imodeli ezithakazelisayo ABS PRO R 100 H?
Lokhu heater amanzi Ariston Yiqiniso, kuyinto bayindlala kakhulu. Ohlangothini plus kubalulekile Ababhali nje kuphela okuhle bafudumale isici, kodwa futhi izinga lokushisa izinga. Phansi kuleli cala elenziwe ngesikhumba ingxubevange zethusi nensimbi. ekilasini ezishisayo Ukuvikelwa isetshenziswa C40. Abanye ochwepheshe bangase baphikise ngokuthi idivayisi ayikwazi withstanding yokucindezela 8 Pa. Fuse, imodeli enza ziyawathinta ukwehluleka. I modulator e heater amanzi is yodwa fike.
Yiziphi nemibi heater is ngesikhathi chungechunge? Abathengi qalani nithi design lilula. Bonisa ngaphandle kokuguqula, futhi umlamuli efakwe nge Ubukhulu ezihlangene. abanikazi Ngisho ukhombe yokuntuleka esebenzayo Ukuvikelwa kagesi. ukulungisa conductivity ayiyinhle. Ukukala ukushisa komzimba ngezithuba 55%. Kulokhu izinga lokushisa esiphezulu - degrees 50. Intengo le heater amanzi Ariston ezitolo iqala ruble 6689.
Emqulwini Amapharamitha ABS PRO PLUS PW 65 V Slim
Yini ehlukanisa imodeli olunikezwa chungechunge? Abathengi lokuqala heater abonisa amandla eziyisisekelo, okuyinto ezenziwe ngensimbi. Esidayisa yakhelwe a ingcindezi 5 Pa. Ochwepheshe abaningi bathi idivayisi Kulula kakhulu ukufaka. Kulokhu, lo conductivity kuba ezingeni eliphezulu. Ukuvikelwa ezishisayo ejwayelekile esebenzayo - Class C50.
Okunye okuphawulekayo kukhona umklamo omuhle, nasekukholweni okungazenzisiyo isilawuli ezihlangene. I modulator imodeli kulolu chungechunge isetshenziswa ne-adaptha. Ukuvuza ezingajwayelekile, futhi leli yi-ukuguqulwa inzuzo. Ayini nemibi amanzi heater babe? Ubuchwepheshe "Eco" divayisi ayisekelwe. Abanye ochwepheshe ukushiya impendulo engeyinhle ngenxa yokuntuleka asebenzayo yesimiso sokuzivikela. Ukuminyana kunethiwekhi bayakwazi ngokushesha okukhulu ngehlise modulator. Zokushisela "Micro" alisetshenziswa ukuguqulwa ukukhiqizwa. Thenga heater amanzi (isitoreji, flat) "Ariston" kungenzeka ruble 6659.
Model izici ABS PRO PLUS PW 80 V
Iziphi izici heater amanzi? Ochwepheshe abaningi bathi idivayisi has heater eliphezulu. Uma le-fuse ngaphansi ifane ne conductivity eliphezulu futhi ukugqwala evikelwe. Futhi ukhulume design imodeli okukhulu. Ukuze ezinkulu efulethini iyunithi ukulingana okukhulu. Nokho, kufanele sikhumbule ukuthi amandla intambo it has a usayizi encane. Enye inkinga yabonakala kundawo amanzi ashisayo. Kumele emelelwa uchungechunge amanzi heater esitolo lisebenze mayelana ruble 6500.